Sina AUMAN EST-Orinasa sy mpanamboatra | Foton
FOTON AUMAN EST Flagship kamio ho an'ny fitaterana lavitra
maotera ISG12E5 / 4/3
Gearbox Marika haingana / ZF
Karazana cab 2490
Hafainganana farany ambony 106/110 km / h
fampiatoana Fitsikilovana amin'ny rivotra
Axle eo aloha 6.5T
Traktera mavesatra ho an'ny tsena logistika avo lenta, novolavolain'i Foton, BFDA ary Cummins niorina tamin'ny ezaka 4 taona tany Eropa sy ny fitsapana an-dàlana 10 tapitrisa km.
Famindra toerana 11L sy 12L
Hatramin'ny famokarana herinaratra 490hp sy famoahana torkia faratampony 2,300Nm
Haingana ny manomboka, ny dimb ary ny tratra
Mahafeno ny fepetra takiana amin'ny toe-piainana isan-karazany
Fitaovana fiarovana mavitrika
Vakin-tsolika motera iBrake2.9
Ny valin-kapila dia misy fitoniana hafanana tsara kokoa, fampisehoana lozisialy tena tsara ary taratra haingana. Teknolojia avoakan'ny motera mahery vaika: hatramin'ny herin'aratra mahery farany hatramin'ny 370pas.
Mihaona amin'ny lalàna mifehy ny fiombonambe mahery indrindra
Ny firafitra sy ny fitaovan'ny vatam-pahefana mahery vaika vaovao dia havaozina amin'ny alàlan'ny fanahafana CAE mba hihaonana amin'ny fitsipiky ny fifandonana ECER-29-03 henjana indrindra ary hahazoana fiarovana azo antoka kokoa.
Ny motera misy famindran-toerana avo sy haingam-pandeha amin'ny hafainganam-pandeha ambany, ny fandefasana AMT, ary ny axe any aoriana misy hafainganam-pandeha dia mifanentana tsara amin'ny fanatsarana ny fahombiazan'ny fiara amin'ny 2%.
Sehatra vaovao namboarina niaraka tamin'ny teknolojia mitarika eropeana ary mamolavola kamiao mavesatra be sy farany iainana amin'ny alàlan'ny ezaka iarahana amin'i Daimler sy Benz mifanaraka amin'ny fenitra R&D Alemanina; Ny maodelin'ny fananganana trano dia zarain'ny kamio mavesatra be rehetra mifototra amin'ny Benz SFTP hiantohana ny kalitaon'ny kamio. Ny chassis miaraka amina sehatra vaovao sy rafitra namboarina dia mandray fitaovana sy teknolojia vaovao hampihenana ny lanja maty sy hitsitsy
Ny chassis miaraka amina sehatra vaovao sy rafitra voavolavola dia mandray fitaovana sy teknolojia vaovao hampihenana ny lanjan'ny maty sy hitsitsiana solika bebe kokoa mifototra amin'ny fepetra fiarovana any Eropa.